YEYINTNGE(ကနဒေါ): ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြေကြားသည် . (၁၄) ဦး တွေဆုံမှု
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြေကြားသည် . (၁၄) ဦး တွေဆုံမှု
၃၁.၁၀.၂၀၁၄နေ. နေလည် ၂း၃၀နာရီကနေပြည်တော် စည်ပင် ဧည်ရိပ်သာ (၂ )တွင်သတင်းထောက်များ က တွေဆုံ မေးမြန်းစဉ်
ဒီချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြေကြားသည် . (၁၄) ဦး တွေဆုံမှု
ဦးရဲထွဋ်က သူသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်မယ်ပြောတယ် ပြောပါအုံးသူတို့ဘာတွေပြောလဲ ဒီဟာကတော့လေ တကယ်တော့ အဲ့လိုပဲပေါ့နော်
တစ်ယောက်ကို လေး၊ငါးဆယ်မိနစ် ဆိုပေမယ့် တစ်ချို့ကတော့ ၁၀ မိနစ်ထက်ကျော်ပါတယ် ဘယ်သူတွေဘာပြောလဲဆိုတာကတော့
သူတို့သက်ဆိုင်ရာလူတွေမေးတာပဲကောင်းပါတယ် ကျမကတော့ ဦးတင်အေးပြောတာကတော့ ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းကိုတော်တော်
အသေးစိတ်ပြောတဲ့အခါကြတော့ ဒါကတော့ပါတီတွေအားလုံးနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော် ရွေးကောက်ပွဲကိုမျှမျှတတ လုပ်မယ် ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ မဲစာရင်းတွေမှန်အောင်လို့ကြိုးစားနေပါတယ် နောက်ပါတီတွေရဲ့အရေးပါမှုပေါ့နော် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ
ရေးမှာ ပါတီတွေဟာ ဘယ်လောက်အဓိကကျလဲဆိုတာကို အဲ့တာကို ဦးတင်အေးကပြောသွားပါတယ် ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးရွှေမန်းနဲ့ ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးခင်အောင်မြင့်ကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပိုပြီးတော့ ဖဒရယ်ဆန်အောင်လို့ ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကို ပြောသွားတယ်
အမေကတော့ အမေအဓိကထားတဲ့အချက်တွေပြောတာပေါ့နော် တခြားဟာတွေလဲရှိတာပေါ့နော် အမေကတော့ စီအီးစီနဲ့လဲတွေ့ခွင့်မရခဲ့ဘူးဆိုတာ ဖိတ်စာရတာ ဗုဒ္ဒဟူးနေ့ မနက်မှရတာ နောက်ပြီးတော့လဲ ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ဆိုတော့လဲ ဘယ်သူနဲ့မှလဲမဆွေးနွေးပါဘူး အဲ့တော့ စီအီးစီရဲ့
အထင်အမြင်တွေလဲ ဘာမှမယူခဲ့နိုင်ဘူး အရှေ့မှာ ပြောသွားတဲ့သူတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေပေါ်မှာပဲ မှတ်ချက်ခြတဲ့အနေအထားပဲရှိတာ
စီအီးစီရဲ့ တရားဝင် သဘာထားဆိုတာတော့ပြောလို့မရဘူးလေ စီအီးစီ အစည်းဝေးမှ မခေါ်နိုင်သေးပဲ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာရှိတယ်
အားလုံးတော့ ၇၅%ကျော်ရမယ်ဆိုတာမျိုး မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ သိပ်ပြီးတော့အရေးမပါတဲ့ဟာပေါ့နော် ဒီလို ၄၃၆လို သိပ်ပြီးတော့အဓိကကျတဲ့ဟာတွေကျတော့မရဘူး ၇၅%ကျော်ရမယ် ပြီးတော့ ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ရမယ် အန်တီကာ
လူအများစိတ်ထဲမြင်နိုင်တာမှ မဟုတ်ပဲ အဲ့တော့ အဲ့တာတွေက သားတို့မီဒီယာတွေရဲ့တာဝန်ပဲ အလုပ်တစ်ခုက ဘာဖြစ်လို့လုပ်လဲပေါ့နော် ဘာကြောင့်လုပ်သလဲဆိုတာကို ဒါရှာဖို့ဆိုတာဟာ မီဒီယာရဲ့တာဝန်ပဲ ဘာဖြစ်
နေလဲတင်မဟုတ်ဘူး ဘာကြောင့်ဒါဖြစ်တာလဲဆိုတာကို စဉ်းစားရမယ် တွေးခေါ်ရမယ် သုံးသပ်ရမယ် နောက်ပြီးတော့လဲ အန်တီတို့ အနေအထားနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော် ဟိုလူကဒီလိုထင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်လို့ မပြောသင့်ဘူး
အဲ့တာတော့ ပြောလို့မရဘူး ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ပဲကိုယ် ပြောလို့ရမယ် ကာချုပ်သဘောထားနဲ့ပါတ်သက်လို့ သိပ်တော့လဲ အံ့အားသင့်စရာမပါပါဘူး အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကတော့ ဘယ်လိုသှတ်မှတ်သလဲဆိုတာတော့ အန်တီမသိဘူးပေါ့နော် အခါအားလျော်စွာ
ဒီလိုနောက်ဟာမျိုးတွေလုပ်မယ်လို့ ဒီလိုပြောတာတော့ရှိပါတယ် အခါအားလျော်စွာဆိုတော့ နည်းတည်းစဉ်းစားရတော့ခက်တာပေါ့
အမေတို့ကတော့ ၄ ပွင့်ဆိုင်ကိစ္စကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ ဆုပ်ကိုင်ထားတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒါဟာကိုဘာမှပါတီစွဲကြောင့်လဲ မဟုတ်ဘူး
၀ါဒစွဲကြောင့်လဲမဟုတ်ဘူး လက်တွေ့ကျကျ လိုအပ်တယ်လို့ထင်လို့ပါနိုင့်ငံ့အတွက် ဒီတစ်ယောက်၁၀ မိနစ်စီပြော
ပြီးတော့ နောက်ဆုံးအထွေထွေရှိသေးလားဆိုတာတော့ အန်တီတို့ အနေနဲ့ ၄ ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲမျိုး မြင်တဲ့ပုံစံတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။
BY YeYint Nge ... 11/02/2014
ပြည်သူများက လက်မခံရန်လိုအပ် သည် ဟု ဦးခင်ညွန့်မှ ပြော
ဒီလူကြီး ယောက်ကျားပီသမယ်ဆိုတာ ယုံကို မယုံတာ
ကျိုက်မရော ရဲ စခန်းမှ ကိုပါကြီးမိန်းမ မသန္တာသိြု့...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ကိုပါကြီသေဆုံးမှုအတွက် စာတစ်စောင်
" တချိန်လုံးလိမ်နေတဲ့ ထိုင်းရဲ"